Xiriirka kubadda cagta Faransiiska oo go’aan cad ka qaatay in horyaalka PSG la siin doono ama in la dhaafin doono – Gool FM
(Paris) 30 Abril 2020. Maamulka horyaalka Ligue 1 oo magacooda loo soo gaabiyo LFP ayaa maanta isugu yimid kulan looga dooday dhammeystirka horyaalka xilli ciyaareedkan 20129-20, iyagoo go’aamiyay in xeerka dhibcaha kulankiiba ay ku siin doonaan koobka kooxda PSG, halka Toulouse iyo Amiens ay hoos u dhici doonaan.
Kaddib kulankii ay subaxnimadii maanta qaateen Ligue de Football Professionnel (LFP), Paris Saint-Germain ayaa la rajeynayaa in saacadaha soo socda loo saleemo saaro horyaalnimada dalka Faransiiska.
PSG ayaa hoggaanka horyaalka ku heysay 12 dhibcood oo nadiif ah oo ay ka sareeyeen kooxda booska labaad ku jira ee Marseille ka hor inta dowladda dalka France aysan ku dhawaaqin in la joojiyay dhammaan dhaq-dhaqaayada ciyaaraha illaa laga gaaro September, waxaana horyaalkooda sagaalaad ee Ligue 1 ay ku qaadi doonaan kala sarraynta dhibcaha marka loo qeybiyo ciyaar walba.
Maamulka horyaalka Ligue 1 ayaa habka ugu caddaaladda dhow ee lagu soo gabagabeyn karo xilli ciyaareedka uu yahay inay ku cabiraan kala sarrayntii u dambeysay horyaalka iyo dhibcaha koox walba ay heshay.
Marseille ayaa si toos ah uga qayb gali doonta tartanka Champions League, halka kooxda booska saddexaad ku jirta ee Rennes ay ciyaari doonto is reeb-reebka loogu soo gubdo heerka guruubyada (group stage) ee Champions League.
Lille ayaa si toos ah u aadi doonta tartanka Europa League heerkiisa guruubyada, halka labada boos ee kale ee loogu soo baxo tartankaas ay ku jiraan Reims (shanaad) iyo Nice (lixaad)
Si kastaba ha ahaatee, kooxaha Saint-Étienne iyo Lyon ayaa wali heli kara fursad ay Reims iyo Nice ay meesha kaga saaraan haddii ay ku soo kala guuleystaan koobabka kala ah Coupe de France oo ay Fiinaalkiisa wada ciyaari doonaan PSG iyo Saint-Étienne, iyo koobka Coupe de la Ligue oo ay fiinaalkiisa ku balansan yihiin Paris Sain-Germain iyo Lyon.
Dhanka kale, marka lagu xukmiyo habka dhibcaha kulankiiba, kooxda Toulouse iyo Amiens waxay u laaban doonaan horyaalka heerka labaad, halka Lens iyo Lorient ay usoo dallaci doonaan horyaalka heerka 1-aad.
Nîmes oo ku jirta booska 18-aad ayaa la rajeynayaa inay baaqi ku sii ahaato horyaalka Ligue 1 maadaama aysan jirin qorsho lagu ciyaarayo kulan bug-bax ah oo lagu go’aaminayo kooxda saddexaad ee hoos u laabaneysa, kaasoo ay la balansanaan lahayd kooxda Ajaccio oo booska saddexaad kaga jirta horyaalka heerka labaad.